PET Cups ထုတ်လုပ်သူများ - China PET Cups Factory & Suppliers
COPAK'S PET ဖလားများသည် ၁၀၀% အစားအစာအဆင့်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကိုဖုန်မှုန့်ကင်းစင်သည့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်ပြီးစီးသည်။ Copak သည် FDA / BRC / QS / SGS / LFGB / ISO9001 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
COPAK-PET ဖလားသည်ကြော့ရှင်းပြီးကြာရှည်ခံသည်၊ အသုံးပြုရန်အတွက်အန္တရာယ်ကင်းသည်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည်။ 100% BPA အခမဲ့နှင့်အဆိပ်မဟုတ်သော။ ကျွန်ုပ်တို့၏ PET cup သည်သူတို့၏ဖက်ရှင်ပုံသဏ္becauseာန်ကြောင့်လူငယ်များနှင့်လူကြီးများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
1.Color: Crystal-Clear သို့မဟုတ်ရောင်စုံပုံနှိပ်
4. အသုံးပြုမှု - အချိုရည်၊ အဖျော်ယမကာ၊ ရေခဲကော်ဖီ၊ ချောချောမွေ့မွေ့၊ ပူဖောင်း / ဘီဘာလက်ဖက်ရည်၊ milkshakes၊ အေးခဲနေသောကော့တေး၊ ရေ၊ ဆိုဒါနှင့်ဖျော်ရည်များ။
၈။ စွမ်းရည် - ၁၂၅ အောင်စနှင့် ၃၇၅ မီလီမီတာ၊
Shanghai COPAK industry Co. , LTD သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိ PET ပုလင်းများနှင့် PET ခွက်များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ PET CUPS အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည် lids နှင့်အတူ PET ပလပ်စတစ်ခွက် သို့မဟုတ် lids မပါဘဲ။
PET ခွက်တွေမှာတော့ငါတို့မှာ ၅ မှတ်၊ ၇ ဇ၊ ၈ oz၊ ၉ oz၊ ၁၀ oz၊ ၁၂ oz၊ ၁၃ oz၊ ၁၄ oz၊ အပေါ်အချင်းသည် ၇၄ မီလီမီတာမှ ၉၈ မီလီမီတာအထိရှိသည်။ သင်လိုအပ်သည့်အရွယ်နှင့်စွမ်းရည်ကိုသာပြောပြပါ၊ သင့်အတွက်မှန်ကန်သော PET ခွက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။
အဖုံးများနှင့် ပတ်သက်၍ လူကြိုက်အများဆုံးအဖုံးမှာ DOME အဖုံးနှင့်ပြားချပ်ချပ် LID ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပွင့်လင်းသောအဖုံးတစ်ဝက်၊ ကောက်ရိုးနည်းသောအဖုံး၊ ငါတို့လိုချင်တာကိုပြရုံပဲ။ စျေးနှုန်းကိုပလပ်စတစ်ခွက်များနှင့်အတူကိုးကားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ PET PLASTIC CUP ၏အနားကွပ်သည်လိပ်ထားသည်။ ဒါကြောင့်ပါးစပ်ချောချောမွေ့မွေ့ ဒါဟာသောက်ဘို့အလွန်ဘေးကင်းလုံခြုံသည်။ အဖုံးများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ PET CUP TOP အချင်းနှင့်ပါးစပ်ပေါ် မူတည်၍ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကောင်းစွာကိုက်ညီသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလပ်စတစ်ဖန်ခွက်၏ယိုစိမ့်မှုကိုသေချာစေသည်။
ပစ္စည်း： PLA နှင့်ပေပစ္စည်း
အတွဲ - ပလတ်စတစ်ခွက် 12oz 340ml / 350ml သို့မဟုတ် 375ml
Logo: COPAK သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအမှတ်တံဆိပ်ကိုလက်ခံနိုင်သည်
ဒီဇိုင်း - OEM / ODM
ငွေပေးချေမှုသက်တမ်း: T / T; L / C; အနောက်ပြည်ထောင်စု
MOQ: 50000pcs ။
Copak ၏လူကြိုက်အများဆုံး 16oz ပလတ်စတစ်ဖလားသည် PET ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ အရွယ်အစားနှင့်အရွယ်အစားမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
32oz PET ခွက်
အရွယ်အစား: 11.5 * 6.5 * 17.6 / 11.5 * 6.3 * 17.8cm
Volume ကို: 32oz, 1000ml
ပစ္စည်း - PET
အနည်းဆုံး - 30000pcs
လက်မှတ်: ISO9001, BRC, FDA, LFGB, QS
ငါတို့အသေးစိတ် 30oz ပေခွက် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း
Copak ထဲတွင် 92မီလီမီတာ PET ခွက် အမျိုးမျိုးသော volumes ကိုမှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ ၃၈ မီလီမီတာ၊ ၁၂ လုံးတစ်လုံး၊ ၃၄၀ မီလီမီတာ၊ ၁၂ စက္ကန့်အမြင့်ဆုံး ၉၈ မီလီမီတာကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤ volumes များနှင့်အချင်းများပါ ၀ င်သော်လည်းကန့်သတ်မထားဘဲ COPAK တွင်မည်သည့်အရွယ်အစားနှင့်ပမာဏကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
95mm PET ခွက်
၉၅ မီလီမီတာ PET ခွက်ပမာဏကို ၈.၅oz၊ ၁၀ ပါ၊ ၁၂ ပါ၊ ကော့တ်95မီလီမီတာ PET ခွက် ၉၂ မီလီမီတာအမြင့်ရှိသောအဖုံးနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသဖြင့်ပလတ်စတစ်ခွက်များကို lids များနှင့်ရှာနေလျှင် copak တွင်လည်းသင်၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ပြားချပ်ချပ်, အမိုးခုံး, ဒါမှမဟုတ်ကောက်ရိုးမဲ့လိုင်းထဲကနေရွေးချယ်ပါ။ နှင့်အတူအဖုံးရွေးချယ်စရာများ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်95မီလီမီတာပေ ခွက် သင့်ရဲ့စားသောက်ဆိုင်ထောက်ပံ့ရေးစတော့ရှယ်ယာမှကြီးစွာသောဖြည့်စွက်စေသည်သောစာရင်းချစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောစိတ်ကြိုက်ခွက်ဒီဇိုင်းဖြစ်သော“ COPAK” သည်ပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်၊ သစ်သီးဖျော်ရည်၊ နို့၊ နို့၊ ကော်ဖီနှင့်ဖျော်ရည်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ “ Good Times” ပုံနှိပ်ခြင်းသည် ၃၆၀ ပတ်ပတ်လည်ရှိပြီးလှပသောအရောင်အသွေးစုံသည့်အရောင်များဖြင့်သင်၏နေ့ကိုတောက်ပစေသည် 95mm PET ခွက်။ ကျဆုံး, ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်မဆိုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော! ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးခွက်ကိုဒီဇိုင်းများတစ်ခုမှာ။
ကော့တ် 98mm PET ခွက် ၉၈ မီလီမီတာအမြင့်ရှိသောအဖုံးနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်ပလတ်စတစ်ခွက်များနှင့်အဖုံးများဖြင့်သင်ရှာဖွေနေပါက copak တွင်လည်းသင်၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါသည်။ ပြားချပ်ချပ်, အမိုးခုံး, ဒါမှမဟုတ်ကောက်ရိုးမဲ့လိုင်းထဲကနေရွေးချယ်ပါ။ နှင့်အတူအဖုံးရွေးချယ်စရာများ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်98mm PET ခွက် သင့်ရဲ့စားသောက်ဆိုင်ထောက်ပံ့ရေးစတော့ရှယ်ယာမှကြီးစွာသောဖြည့်စွက်စေသည်သောစာရင်းချစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။
Copak ထဲတွင် 98mm PET ခွက် အမျိုးမျိုးသော volumes ကိုမှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ ၃၆၂ မီလီမီတာ၊ ၆၂၀ မီလီမီတာ၊ ၆၂၀ မီလီမီတာနှင့် ၇၂ မီလီမီတာအမြင့်သည် ၉၈ မီလီမီတာအထိရှိသည်။ ဤ volumes များနှင့်အချင်းများပါ ၀ င်သော်လည်းကန့်သတ်မထားဘဲ COPAK တွင်မည်သည့်အရွယ်အစားနှင့်ပမာဏကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
Bisphenol A (BPA) သည်ဓာတုပုံသေနည်း (CH3) 2C (C6H4OH)2ပါ ၀ င်သည့်အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သော hydroxphenyl အုပ်စုနှစ်ခုနှင့်အတူ diphenylmethane derivatives နှင့် bisphenols အုပ်စုဝင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်များတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော်လည်းအရောင်မရှိသောအစိုင်အခဲဖြစ်ပြီးရေတွင်ပျော်ဝင်မှုနည်းပါးသည် (၈၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ၀.၃၄၄ wt%) ။
Shanghai Copak လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်အဆင်ပြေသောကျန်းမာရေးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ထုပ်ပိုးနိုင်သောထုတ်ကုန်များအတွက်ဖြည့်တင်းပေးခြင်းနှင့်စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ ကော်ဖီဆိုင်၊ နို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ အချိုပွဲအိမ်၊ ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်၊
COPAK ၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ China PET ပုလင်းများ၊China PET cup, PET ကွန်တိန်နာ, PET ဗန်း။ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကစားစရာများ၊ လက်မှုပညာ၊ အလှကုန်များ၊ လက်ဆောင်၊ ဆေးဝါး၊ ကျန်းမာသောထုတ်ကုန်များ၊ နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များနှင့်စာရေးကိရိယာပစ္စည်းများထုပ်ပိုးရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်သင်လိုအပ်သမျှကိုသင်ရှာနိုင်သည်။
China PET Cup ထုတ်လုပ်သူ
အဖြစ်လူသိများရှန်ဟိုင်း COPAK တရုတ် PET ခွက်ကိုထုတ်လုပ်သူ, ကို 2010 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် COPAK ရဲ့ PET ခွက်၎င်း၏ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ရဲ့အရသာ, texture နှင့်အသွင်အပြင်ကိုဆက်လက်တည်ရှိနိုင်စွမ်းကြောင့်လူသိများကြသည်။ ၎င်းသည်ခွက်၏ကြည်လင်ပြတ်သားမှုက၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအရာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်ခမ်းနားသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ PET ခွက်များသည်ဖျော်ရည်များ၊ ဖျော်ရည်များ၊ ရေခဲကော်ဖီများ၊ ကျန်းမာရေးလှုပ်ခြင်း၊ အချိုပွဲများ၊ အခွံမာသီးနှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်များ၊